खराब वाइपर कारको विन्डसिल्डको लागि हानिकारक, यी सावधानीहरु अपनाउनुहोस्
अहिले वर्षातको मौसम शुरु भइसकेको छ । यस्तोमा सबैभन्दा बढी विन्डसिल्डमा वाइपरको प्रयोग भएको हुन्छ । गाडीको अन्य पार्टस्मा जस्तै वाइपरको पनि अहम् भुमिका रहेको हुन्छ । खराब वाइपरले विन्डसिल्डमा नोक्सानी पु¥याइरहेको हुन्छ । वाइपरलाई समय समयमा जाँच ग...
नयाँ कार किन्दै हुनुहुन्छ ? यी ५ सेफ्टी फिचर छन् कि छैनन् ?
यदि तपाईं नयाँ कार खरिद गर्ने सोच बनाउदै हुनुहुन्छ भने तलका ५ फिचर छ कि छैन भनेर जाँच गर्नुहोस । भारतीय बजारमा १ जुलाई २०१९ देखि हरेक कारमा यी ५ फिचर हुनु अनिवार्य भएको छ । यी फिचरले कारको मुल्यमा २० देखि ३० हजार भारु बढ्नेछ । केही कम्पनीहरुले यी फि...
के हो हाइब्रिड कार ? सामान्य कार भन्दा के फरक छ हाइब्रिड कार ?
बजेटले हाइब्रिड कारको आयातमा ५० प्रतिशत कर छुट गर्ने समाचार हालै सार्वजनिक भएको छ । यसका कारण नेपाली बजारमा अब हाइब्रिड कार पहिले भन्दा सस्तो हुने भएको छ । यससँगै हाइब्रिड कारको चर्चा पनि चुलिएको छ । के हो हाइब्रिड कार ?विश्वभर बढिरहेको प्रदूषणलाई न...
कारको ब्याट्री कति दिन सम्म चल्छ ? यसरी पत्ता लगाउनुस् गल्ती
विशेषगरी कुनै पनि सवारी साधनको ब्याट्रीले विहानपख वा चिसो मौसममा धोका दिन सक्छ । यस किसिमको मुश्किलबाट बच्नको लागि केही साना साना कुरामा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । आफ्नो सवारी साधानमा ब्याट्री कहिले परिवर्तन गरिएको हो सो कुराको जानकारी हुनु जरुरी छ । क...
के हो माइलेज ? कसरी बढाउने बाइकको माइलेज ?
प्रति एकाइ आयतनमा बाइकले पार गरेको दुरीलाई माइलेज भन्ने गरिन्छ । सामान्यतयाः एक लिटर पेट्रोलले जति किलोमिटर सम्म हाम्रो सवारी साधन गुड्छ, त्यसैलाई हामीले माइलेज भन्ने गर्छौ । यद्यपि माइलेजलाई हावामा भएको प्रदूषणको मात्रा, इन्धनको गुणस्तर जस्ता कुराह...
के हो क्लच ? कसरी गर्ने क्लचको सुरक्षा ?
क्लच सवारी साधनको एक महत्वपूर्ण पार्ट्स हो । यसले सावधानिपूर्वक इन्जिनले उत्पादन गरेको पावरलाई ड्राइभट्रेनमा पुर्याउने काम गर्छ । साथै क्लचले गियर डिस्कको दातीलाई असर नपुग्ने गरी सजिलै गियर फेरबदल गर्न पनि मद्दत गर्छ । हामीले क्लचको प्रयोगमा ध्यान...
पुरानो बाइक किन्दै हुनुहुन्छ ? के फाइदा ? के बेफाइदा ?
धेरै मानिसहरु पुरानो अर्थात सेकेन्ड ह््यान्ड बाइक किन्न चाहन्छन् । यद्यपि पुरानो बाइक खरिद गर्दा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा बाइकको मेन्टिनेन्टमा धेरै पैसा खर्च भइरहेको हुन्छ । तर राम्रो कन्डिसनको बाइक खरिद गर्दा भने २/३ वर्ष आरामले चलाउन सकिन्छ र...
गर्मीमा बाइकको माइलेज घटेको छ भने चिन्ता नलिनुस्, यी उपाय अपनाउनुस्
मोटरसाइकल जस्तो भएपनि सबैजना बाइकको माइलेज बढोस् भन्ने चाहन्छन् । हुन त यो बाइक राइडरमा पनि निर्भर रहेको हुन्छ । गर्मीसँगै बाइकको माइलेज पनि घट्दै गएको हुन्छ । तर यी ४ कुरामा ध्यान दिन सकेमा बाइकको माइलेज बढाउन सकिन्छ । घाममा पार्किङ नगर्नु जानेर व...
गाडीको इन्जिन सिज भएको हामीले सुनेका वा भोगेका छौ । आखिर के हो त इन्जिन सिज भनेको ? इन्जिन लक हुनु वा यो चल्न बन्द गर्नु नै इन्जिन सिज हुनु हो । लापरवाहीका कारण पुरानो मात्र होइन, नयाँ गाडीको इन्जिन पनि सिज हुन सक्छ । निम्न कारणले इन्जिन सिज हुन्छ...
हाइवेमा ड्राइभिङ गर्दै हुनुहुन्छ ? यी कुरामा ध्यान दिनुस्
हाइवेमा ड्राइभिङ गर्दा ट्राफिकको तनाव त हुँदैन, तर स्पिड र ओभरटेक गर्दा केही कुरामा ध्यान दिनु पर्ने हुन्छ । हाइवेमा ड्राइभिङको समयमा सानो गल्तीले सबैलाई हानी पु¥याउन सक्छ । ओभर स्पिड सधै खतराजनक हुन्छ । हाइवेमा ड्राइभिङ गर्दा मुख्यतया यी कुरामा...
होलीको रङबाट यसरी बचाउनुस् आफ्नो कार वा बाइकलाई
होलीको बेलामा एक आपसमा रङ छ्याप्नु स्वभाविकै हो । होलीको बेलामा कतै घुमेको समयमा आफ्नो सवारी साधनमा रङ लाग्न सक्छ । त्यो रङलाई हटाउन र रङ लाग्न नदिन निम्न उपायहरु अपनाउन सकिन्छ । वास्क पोलिशहोलीको बेलामा तपाईं आफ्नो कार वा बाइकलाई रङबाट बचाउन चाहनुह...
सेकेन्ड ह्यान्ड गाडी किन्दै हुनुहुन्छ ? यी ९ कुरामा ध्यान दिनुस्
सेकेन्ड ह्यान्ड अर्थात पुराना गाडी आफैमा नराम्रा हुँदैनन् । बजारमा राम्रो कन्डिसनका पुराना गाडीहरु किन्न पाइन्छ । आर्थिक दृष्टिकोणले पनि यी गाडी किन्नु फाइदाजनक हुन्छ । यद्यपि अलिकति मात्र ध्यान नदिने हो भने यसबाट ठगिने सम्भावना पनि हुन्छ । यदि तपाई...
गुडिरहेको कारमा किन लाग्छ आगो ? कसरी बचाउने ?
गर्मीको मौसममा टन्टलापुर घाममा गाडी पार्किङ गर्नु पर्ने समस्या सबैको हुन्छ । यस्तो स्थितिमा गाडी तातिनु स्वाभाविकै हो । कतिपय अवस्थामा अन्य अवस्थामा समेत गुडिरहेको कारमा अचानक आगो लागेको पाइन्छ । साधारणतथा कारको मालिक वा चालकको लापरवाहीको कारणले गुडि...
नयाँ कार छ तपाईसँग ? त्यसो भए नगरौं यी ६ गल्ती
हामीले धेरै रहरका साथ नयाँ कार किन्छौ । तर नयाँ कार चलाउदा सावधानी अपनाउनु आवश्यक छ । कतिपयले थाहै नपाई नयाँ कारलाई आफूखुसी रुपमा चलाइरहेका हुन्छन् । विभिन्न कारणले कारको इन्जिन र अन्य विभिन्न पक्षमा असर पुग्न सक्छ । त्यसैले नयाँ कार किने पछि केही क...
सावधान, टिपरको अगाडि पनि देखिदैन बाइक
टिपरको छेउछाउ वा अघिल्लो भागमा भएका बाइक वा स्कुटर नदेखिने समस्याका कारण नै धेरै दुर्घटना भएको पाइएको छ । गोल्डविङ वर्ल्डले यसको तस्बिर समेत सार्वजनिक गरेको छ । तस्बिरको अघिल्लो भागमा भएको बाइक टिपरको ब्लाइन्ड स्पटको रुपमा रहेका र दुर्घटना हुने सम्भ...
मोटरसाइकलमा रिजर्भ अन वा अफ के गर्ने ? यस्तो छ तथ्य
आज मोटरसाइकल चलाउँदा एउटा सामान्य कुरामा ध्यान गयो – १३ लिटरको पेट्रोल ट्याङ्की त्यसमा थप २ लिटर (करिव १५%) रिजर्भको ब्यबस्था गरेको छ। ट्याङ्कीमा तेल सकिन लाग्दा तेल सकिन लागेको Indicator बल्छ। मैले चाहेंभने पेट्रोल पुरै नसकिंदै भर्न सक्छु वा अ...
तपाई कार किन्दै हुनुहुन्छ र पेट्रोल वा डिजेल कुन कार छान्ने भन्ने द्धिविधामा हनुहुन्छ भने यो खवर तपाईका लागी फाइदाजनक हुनसक्छ । किनभने हामीले पेट्रोल र डिजेल इन्जिन भएका कारको फाइदा÷बेफाइदाबारे केलाउने प्रयास गरेका छौ । इन्धनको मुल्यले मात्र क...
लुब्रिकेन्ट्स बारे जान्नैपर्ने कुरा
लुब्रिकेन्ट्स एक प्रकारको चिल्लो अर्थात तेलीय पदार्थ हो । यसका आफ्नै गुणहरु हुन्छन् । लुब्रिकेन्ट्स बिभिन्न प्रकारका हुन्छन जसमध्ये इन्जिनमा प्रयोग हुने लुब्रिकेन्ट्सलाई इन्जिन आयल अर्थात इन्जिन लुव्रिकेन्ट्स भनिन्छ । इन्जिन आयलले चिप्लो पार्ने, खिया...
यसरी सफा गरौं बाइक वा स्कुटर, हेर्नुस् ६ टिप्स
हामी धेरैले आफ्नो बाइक वा स्कुटर आफै सफा गर्छौ । सफा बाइकले बाइक वा स्कुटर धनीको ब्यक्तित्वको पहिचान पनि गराउछ । तर सबै बाइक वा स्कुटर धनीले सही तरिकाले सफा गरेको पाइदैन । वर्कसप वा वासिङ सेवा उपलब्ध गराउने स्थानमा भने विभिन्न तरिकाले सफा हुने गरी ब...
गाडी वा मोटरसाइकलको ब्याट्रीमा आउन सक्छ समस्या, के गर्ने ? के नगर्ने ?
गाडी वा मोटरसाइकलमा भएको ब्याट्रीको समस्यालाई लिएर धेरै उपभोक्ताहरु असन्तुष्ट भएको पाइन्छ । खरिद गरेको छोटो अवधिमै समस्या देखिन थालेपछि उपभोक्ताहरुमा आफूले किनेको ब्रान्डप्रति अविश्वास जाग्नु स्वभाविकै पनि हो । तर व्यवसायीहरुका अनुसार ब्याट्रीमा आउन...
मेकानिक्स दीपक श्रेष्ठ भन्छन् : जाडो समयमा मोटरसाइकलमा आउन सक्छन् यस्ता समस्या
जाडोको समयमा मोटरसाइकल स्टार्ट नहुने समस्या धेरै पाइन्छ । चिसो मौसममा मोटरसाइकल स्टार्ट नहुनु एक सामान्य प्रक्रिया नै बनेको छ । जाडोको समयमा चिसोको कारणले तेल फ्रिज हुन्छ र राम्रोसँग सर्कुलेसन हुन सक्दैन जसले गर्दा कम्प्रेसन नपुगेर बाइक स्टार्ट हुदै...
टिप्स : सावधान पेट्रोल पम्पले ठग्लान् , ध्यान दिनुस् यी ८ कुरामा
पेट्रोल पम्पहरुबाट लगाइने पेट्रोल वा डिजेल तिरेको रकम अनुसार पाइँदैन, कम परिमाणमा पाइन्छ, ठगी हुन्छ वा मिसावटको समस्या हुन्छ भन्ने जस्ता अनेकन गुनासाहरु बारम्बार आउने गर्छन् । यही अभियोगमा पेट्रोल पम्प सञ्चालकहर बेलाबखत प्रहरीको फन्दामा समेत परिसकेका...
आफ्नो सवारी साधनले अर्को सवारी साधन, व्यक्ति वा भौतिक सम्पत्तिलाई क्षति पु¥याएको अवस्थामा आईपर्ने आर्थिक जोखिम हस्तान्तरण गर्नु तेस्रो पक्ष बिमा हो । यस योजनाअनुसार आफ्नो सवारी साधनले अन्य साधन वा सम्पत्तिलाई हानी पु¥याएको अवस्थामा तेस्रो पक...
बाइक चलाउनुअघि यी कुरामा ध्यान दिऔं
बाइक लिएर निस्कनुअघि यसको अवस्था जान्दा सबै यात्रुलाई फाइदा हुन्छ : १. बाइकमा तेल पर्याप्त छ/छैन ।२. इन्जिन आयल पर्याप्त छ/छैन र छ भने सफा छ/छैन ।३. टायरको अवस्था कस्तो छ ?४. चेन ठिक छ/छैन । यो माटो लागेर बढी फुस्रो त भएको छैन ।५. तेल चुहिएको छ कि ?...